Tag: email stats ahịa | Martech Zone
Tag: email stats ahịa
Mgbalị Mgbasa Ozi Email Gị Adịghị Mkpa Ọ bụrụ na Not Bughi Igwe Kachasị Mma
Sundaybọchị Sọnde, Ọgọstụ 31, 2014 Tọzdee, Machị 3, 2016 Douglas Karr
Ka anyị na-achọ imeziwanye njikọ anyị, ihe mbụ anyị mere bụ mejuputa ndebiri ozi nzaghachi na-eji nyiwe anyị, CircuPress, kesaa ọdịnaya ahụ (Debanye aha kwa ụbọchị ma ọ bụ kwa izu). Mgbanwe e nwere n’ọnụ ọgụgụ abụghị obere ihe. Anyị na-eziga ihe karịrị ndị debanyere aha 70,000 na Monday na nchịkọta anyị kwa izu na nchịkọta anyị na-egosi anyị na nke ahụ na-abawanye na okporo ụzọ anyị karịa ihe ọ bụla ọzọ ma ọ bụ nkwalite ọ bụla. O meghị ruo mgbe
Amachaghị m na ọnụọgụ email ọ bụla na-egosi ebe a dị mkpa maka ịre ahịa email gị, mana ole na ole n'ime ha kwụrụ m nso: Ego Mgbasa Ozi Email bụ ihe ijuanya na ọ dị obere. Ọ na-eju m anya na blọọgụ nke anyị na ịdebanye aha isiokwu ahụ na - ere out mana ọ nweghị onye zụrụ mgbasa ozi na akwụkwọ akụkọ kwa ụbọchị na kwa izu nke ruru ndị debanyere aha 75,000 kwa izu. Email nkuchi bụ na a elu, na